Rock Space UV Sterilizer (White) ~ ICT.com.mm
HomeRock Space UV Sterilizer (White)
Rock Space UV Sterilizer (White)
UV sterilization without residue Fast sterilization Compact design, portable size Expandable design, 1L Volume Phone stand Smart protection, safe & secure Stylish colors, stunning appearance Quality assurance, worry-free quality Warranty: 1 Year... [Learn more]
Brand: Rock SpaceSKU: 152502N/ASee more: Health & Wellness, Lifestyle, Products, Recent Updates, Rock Space, Shop, Under 100kFilter by: Hand Washes & Sanitisers
UV sterilization without residue
Compact design, portable size
Expandable design, 1L Volume
Smart protection, safe & secure
Stylish colors, stunning appearance
Quality assurance, worry-free quality
ဆေးရုံနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံး ပိုးသတ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ Rock Space ပိုးသတ်စက်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်က ရောဂါပိုးမွှားတွေနဲ့ အဏုဇီဝပိုးလောင်းတွေရဲ့ DNA ကို ဖျက်စီးပစ်ပြီး ရှင်သန်ကူးစက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့အောင် ချေဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ စက်အတွင်းမှာ ၅ မိနစ်ကြာ ထည့်သွင်းထားရုံနဲ့ ပိုးမွှားတွေရဲ့ 99.9% ကို အလျင်အမြန် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျစ်လျစ်တဲ့ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ယူသွားနိုင်ပြီး အချိန်မရွေးနေရာမရွေး ပိုးသန့်စင်ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်ထည်ကို ဆံ့ဝင်ပမာဏ တစ်လီတာ အရွယ်အစားအထိ ချဲ့လို့ရတဲ့အတွက် စမတ်ဖုန်း၊ Power Bank၊ နားကြပ်၊ အားသွင်းကြိုး၊ သော့ချိတ်နဲ့ အခြားနေ့စဉ်သုံး အသုံးအဆောင်တွေကို အဆင်ပြေပြေ ပိုးသတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Sensor ပါဝင်တဲ့အတွက် စက်အဖုံးကို 50° ထက်ကျော်ပြီး ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အလိုအလျောက် ပိတ်ထားပေးမှာဖြစ်လို့ ရောင်ခြည်ကြောင့် မျက်စိထိခိုက်မှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
UV Sterilization No Residue
Ultraviolet disinfection technology is commonly used in hospitals, military and aerospace fields. It uses pure physical sterilization method and 254nm ultraviolet wavelength irradiation to instantly destroy DNA chains of germ and other microorganisms, making it unable to reproduce or survive.
It can sterilize thoroughly with fast speed killing more than 99.9% of the germs in5minutes!
As light asakindle after folding, it enables you to enjoy safe sterilization anytime and anywhere working withapower bank.
You can sterilize whatever fits inside: mobile phone, power bank, earphone, charger, cable, ornament and other daily-used items.
With built-in gravity angle sensor, the ultraviolet light will be off automatically when the tilt angle of the upper cover is above 50°, which protects your eyes from UV light.
Total price:K125,845 K109,145
This item: Rock Space UV Sterilizer (White) K34,000